Home Wararka Farmajo iyo Fahad oo CBB shalay Iyo maanta ku Amray inay Caayaan...
Farmajo iyo Fahad oo CBB shalay Iyo maanta ku Amray inay Caayaan Dr Maryan Qaasim
CBB waxay loo sameystay dulmi, caay, aflagaado iyo gefaf aan la iskula xisaabtameyn oo dulmi iyo sed bursi been amaan ah lagu gunto. Shalay iyo maanta waxaa CBB lagu fasaxay inay si aan waxa lala meel dhigaa jirin uga falceliyaan hadal daacadnimo iyo Alle ka cabsi leh oo ay barteeda Bulshada soo dhigtay Dr. Maryan Qasim oo rabbi hortiis u qiratay inay ku khaldantay Farmajo oo cid waliba oo damiir diini ah leh ay hadda garaneyso inay ku khaldameen beentii iyo Waddniyaddii loo oomanaa oo uu abaar eber ka dhigay.
Haddaan dib u fiirinno Dr. Maryan Qasim waxay golaha wasiirada Kheyre iska casishay kadib markii uu Kheyre Saxeexay waraqadda gacanta loogu gelinayo Itoobiya Halgame Cabdikariin Sheekh Muuse ‘Qalbidhagax”, kadib markii ay ka Shireen isaga iyo Farmajo iyo koox yar oo dhiigga waddaniyeed laga siibay balse shaarkii gashan. Qalbidhaga waa Aabbe, waa Say, waa wiil, waana walaal Somaliyeed Dr. Maryanna haddii adiga CBB-ga ah ee caynayaa laguu dhiibi lahaa cadowgii Itoobiya oo aad shalay haraameysay sidaas ayey sameyneysaa waayo waxa aad ka halleyneyso waxa aad u tahay ayaa kala weyn oo ah taas oo ah walaal Somali Muslim ah.
Haddaba waxaa baraha bulshada wareegaya caay iyo aflagaado xataa Somalinamada, biri-mageynimada iyo tan ugu weyn oo ah hooyanida ay Islannimada ka sii weyn tahay ka gudubsan ay CBB-ga Villa Somaliya wadaan.
Bal akhriste Hadalka Dr Maryan waxaa uu ahaa sidaan “ Waxaan rabaa inaan ummadda soomaaliyeed u caddeeyo inaan Farmaajo ku sirmay sidii dad badan oo Somali ah. Waa khaa’in muwaadin soomaaliyeed u gacan geliyay cadawga tigreega. Markaan arkay xaqiiqdiisa waan ka tagay dawladii uu Madaxweynaha ka ahaa. Magacayga ii daaya.” Waa hadal aad u qiimo badan waayo qofka waa loo ogol yahay inuu gefo, waxaasa la rabaa inuu gefkiisa qirto kana towbad keeno, Dr Maryanna intaas ayey sameysay.
Marka hooyo Somaliyeed oo masuul soo noqotay una damqatay qof Somaliyeed oo awooddii loogu adeegi lahaa lagu dulmiyey CBB laga adeejiyo oo si waxashnimo loo caayo, Farmajaha iyo Fahadka ku farxayaa waa waxa cadeynaya cidda ay yihiin Labadaan qof iyo inta fekerkaan la qabta.
CBB waa shaqaale mushaar qaata oo haddii musqulaha qoda la yiraahdo qodaya oo aan go’aan iyo damiir lahayn, waayo kuwa hadda ka liita shillinta iyo qaniin cayayaanka ay magaca wadaagaan oo marka uu Neefka dhinto ka taga oo aan cunin, laakiin CBB Villada weli waa fahmi la’ayihiin in Farmajo uu dhintay oo ay tahay goortii ay Allah u towbad keeni lahaayeen, shacbiga ay beenta intaas ku wadeenna ay cafis weydiisan lahaayeen.
Haddaba xildhibaan waxaan kaa fileynaa inaadan ku kadsoomin qoraallada weerarka ah ee CBB oo aadan u macneysan inuu yahay mid ka tarjumaya xaaladda dhabta ah. Farmajo iyo Fahad waxaa mushaar joogto ah ka qaata ilaa 400 oo qof oo isugu jira nooc kasta oo dhammaantood filiya xumaan iyo samaan wixii ay Farmajo iyo Fahad rabaan.
Ogow CBB waxaa ku jira culimo ku sheeg, masuul ku sheeg, aqoonyahan ku sheeg waxaana liiska mushaaraadka lagu bixiyo oo aan sugeyno inaan gacanta ku dhigno u soo bandhigi doonaa shacabka dhowaan.
Previous articleXeer Ilaaliyaha Qaranka oo u yeeray Wasiirka Batroolka Somalia
Next articleFadeexad ka dhalatay lacagta lagu dhisay Wasaaradda Qorsheynta Puntland? Yaa bixiyay lacagtaas?
waxaa xal laga gaaray ciidamadii Jowhar isku dagaalay